Nosy Maorisy : zakan’ny tanora malagasy ny oniversite Uniciti | NewsMada
Nosy Maorisy : zakan’ny tanora malagasy ny oniversite Uniciti
Tsapa fa mahazaka sekoly ambony ny tanora malagasy. Noho ny fahitana izany, hanao varavarana misokatra eto Antananarivo ny Uniciti ao Nosy Maorisy ny 27 janoary ho avy izao eny amin’ny American center Tanjombato. Hampahafantarina amin’io fotoana io ny fisian’ny fampianarana ambony zakan’ny tanora malagasy, araka ny sokajim-pahaizany avy hatramin’ireo mitady fiofanana.
Afaka mamaly ny hetahetan’ny tanora malagasy ny Uniciti ao Nosy Maorisy, hanana safidy na amin’ny teny fampiasa hoenti-mianatra aza. Karazam-piofanana maro no hita hahazoan’ny tsirairay misafidy sy miditra amin’ny karazan’asa tiany. Vonona ny tompon’andraikitra ao amin’ny Uniciti hizara ny vaovao tsara ho fantaratra rehetra amin’ny tanora mpianatra sy ny ray aman-dreny. Anisan’izany ny momba ny fandaharam-pianarana sy mari-pahaizana.